Previous Article A Dụọ Ụmụ Nwaanyị Ka Ha Tinye Aka n'Imegide Otu Nzuzo Na Ọgwụ Ike
Next Article Oriakụ Obianọ Arụọrọ Nwaanyị Ọzọ Di Ya Nwụrụ Ụlọ Ọhụụ
Dịka oge udummiri ji nwayọ nwayọ wee na-akpụchàpụ ikè, ọkọchị wee na-akpụdòbe nso; gọpmenti steeti Anambra akpọkuola ndị ji ọrụ ngo okporo ụzọ dị iche iche na steeti ahụ ka gaghàchi n'ihu ọrụ ha ma màlitekwa ọrụ.
Oku a bụ nke a kpọrọ site n'ọnụ aka na-achị steeti ahụ, bụ Gọvanọ Willie Obianọ n'okwu ya oge ọ gàrà ileta ka ọrụ ngo si aga n'ụfọdụ okporo ụzọ dị iche iche na ya bụ steeti, nke gụnyere okporo ụzọ Nchekwube Onochie — Mmiri Ezu, bụ 'Nchekwube Onochie — Ezu River Road' nakwa okporo ụzọ Maduaburochukwu Obiano, dị n'Ogbunike n'okpuru ọchịchị Oyi.
Ka o rùtèrè n'ebe ndị ahụ, Gọvanọ Obianọ gosipụtara afọ ojuju ya bànyere otu ya bụ ọrụ okporo ụzọ si aga, ọ kachasị otu e siri memìlaa mbize ahụ na-akpabụ ike na mpaghara okporo ụzọ Nchekwube Onochie — Ezu, ma kwupụtakwazie na ọrụ okporo ụzọ bụ nnọọ ihe dị oke mkpa ma na-echukwa ọchịchị ya ụra, n'ihi ezi ihe dị iche iche nke ahụ ga-enye aka kwàlite na mmepe steeti ahụ.
N'okwu ya bànyere okporo ụzọ Mmadụabụrọchukwu Obianọ, bụ nke ogologo ya dị Kilomita anọ na ụma isii; Gọvanọ Obianọ mèrè ka a mara na ya bụ iro ga-enye aka ibèlàta nsogbu agbakata akwụrụ ahụ na-adịkarị n'ụzọ awara awara n'oge mmemme ekeresimeesi, ma kwuo na a ga-arụchapụ ya bụ ụzọ ma tinyesie ya akụrụngwa dị iche iche tupuu mmemme ekeresimeesi nke ahọ a eruo, n'ihi na a na-atụ anya ọtụtụ ụmụafọ Anambra ga-abata ụlọ n'ahọ a.
Na ntụnye nke ha n'otu n'otu, Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti Anambra, bụ Maazị Marcel Ifejiọfọ mere ka a mara na gọọmenti na-enye ndị ji ọrụ ngo ahụ nkwàdo zuru òkè iji rụchaa ya bụ ọrụ n'oge a tụrụ anya; ebe eze ọdịnala Agụleri, bụ Igwe Michael Idigo na ògbò ya nke Ogbunike, bụ Igwe John Umenyịọra kèlèrè Gọvanọ Obianọ maka ezi agbambọ ya n'ịhụ na e nwèrè ezi okporo ụzọ nà mmepe tọrọ àtọ na steeti ahụ, ọ kachasị n'ime obodo na ebe ndị ọzọ dị iche iche. N'aha obodo dị iche iche, ndị eze ọdịnala ahụ kwèkwàzịrị nkwà ịga n'ihu n'ịkwàdosì ọchịchị nọ ugbua na steeti ahụ ike n'imezùpụta ezi ọrụ dị iche iche ọ na-abàgide.
N'akụkọ dịkwa ka ibe ya, Gọvanọ Obianọ gakwàrà ọzọ ileta ka ọrụ si aga n'ebe ahụ a na-arụ ụlọ ezumeezu mba ụwa n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ.
N'okwu ya n'ebe ahụ, ya bụ aka na-achị achị gbàrà àmà na ọtụtụ ngwaọrụ a ga-etinye na ya bụ ọrụ adịlaarị njikere, ma kwuokwa na ya bụ nnukwu ụlọ ezumeezu ga-enye aka n'iweta mmepe na n'ịkwàlitèkwu ọnọdụ akụnụba steeti ahụ ma ọ bụrụ na a rụchaa ya. Ọ sịkwazị na ọrụ ga na-agawanye n'ihu ebe ahụ wee tutuu na a rụchàpụ ya bụ ụlọ ezumeezu n'ọnwa Epùrè ahọ ọzọ.